अर्थमन्त्रीले किन देखेनन् कपडामा अर्बौं राजस्व छली? साढे ३ खर्बको बजारमा ४५ अर्बमात्रै वैध ! « GDP Nepal
अर्थमन्त्रीले किन देखेनन् कपडामा अर्बौं राजस्व छली? साढे ३ खर्बको बजारमा ४५ अर्बमात्रै वैध !
Published On : 13 May, 2019 8:10 am
काठमाडौ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भन्सारमा कडाइ गरे पनि नेपाल भित्रिने कपडाको अवैध व्यापार भने रोक्न सकेका छैनन् । मुलुकमा वार्षिक ३ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कपडा तथा कपडाजन्य वस्तु खपत हुने गरे पनि ४४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको मात्र वैध कारोबार हुने गरेको छ ।
यसरी ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अवैध व्यापार हुने क्षेत्रमा अर्थमन्त्रीले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको अध्ययनले देखाएको छ । प्रतिव्यक्ति वार्षिक १२ हजार १९ रुपैयाँ बराबरको कपडा तथा कपडाजन्य वस्तु खपतका आधारमा यो तथ्यांक निकालिएको हो ।
संघका उपाध्यक्ष जीतेन्द्र लोहियाका अनुसार नेपालमा प्रतिव्यक्ति कपडा खपतसम्बन्धी छुट्टै तथ्यांक नभएकाले भारतको तथ्यांकलाई आधार मानिएको हो । सन् २०१८ मा भारतको प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष कपडा खपत अमेरिकी डलर ७२.९२ रहेको छ । जसमा भारतमा गरिबीको रेखामुनीको जनसंख्या ३१ प्रतिशत रहे पनि नेपालमा २१ प्रतिशतमात्र छ ।
यस आधारमा नेपालमा कपडाको खपत १० प्रतिशत थप भएर अमेरिकी डलर ८०.२१ बराबर हुन आउने जनाइएको छ । यसमा कपडा आयात गर्दा नेपालमालाग्ने भन्सार, भाडा, मूल्य अभिवृद्धि करको रकम जोड्दा ३५ प्रतिशत थप भएर १०८.२८ डलर खपत हुने र हालको सटही दरमा १२ हजार १९ रुपैयाँ पुग्ने जनाइएको छ । यसरी नेपालमा वार्षिक कपडा खपत ३ खर्ब ५५ अर्ब हुने आकलन छ ।
अवैध आयात तथा न्यून विजकीकरण रोक्नुपर्ने तथा विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने माग उद्योगीको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षको आर्थिक नीतिमार्फत उद्योगीलाई दिँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा ७५ प्रतिशतसम्मको छुट सुविधा कटौति गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सो नीतिप्रति उद्योगीहरूले आपत्ति जनाउँदै आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विश्वका कुनै पनि राष्ट्रमा भ्याट फिर्ताको प्रचलन नभएको भन्दै अन्य सुविधा दिन सकिने तर भ्याट फिर्ता नहुने अडान राख्दै आएका छन् ।